Train Travel Denmark Archives | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ရထားခရီးသွားဒိန်းမတ်
စာဖတ်ချိန်:5မိနစ်များ ဥရောပအလှဆုံးလမ်းများကိုအချို့နှင့်ပြည့်ဝ၏. အများဆုံးကြော့နှင့်ရောင်စုံအနေဖြင့်ပုံမှန်မဟုတ်သောအဖို့. အလှဆုံးလမ်းများကိုခုနှစ်တွင်ဥရောပအချို့သည်ပြီးသားရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းနှင့်ကောင်းမွန်စွာထူထောင်ခရီးသွားလမ်းကြောင်းအပေါ်ပေမယ့်အခြားသူများကိုသာအစစ်အမှန်က hidden ကျောက်မျက်ဖြစ်ကြ၏…
ရထားခရီးသွားခြင်း, ရထားခရီးသွားဘယ်လ်ဂျီယံ, ရထားခရီးသွားဒိန်းမတ်, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ရထား Travel အီတလီ, Train Travel စကော့တလန်, ...
ဥရောပမှာတော့အကောင်းဆုံးချောကလက် Stores ဘာတွေလဲ
စာဖတ်ချိန်:6မိနစ်များ အဆိုပါဥရောပတိုက်ကြီးက၎င်း၏အံ့သြဖွယ်များနှင့်အရသာချောကလက်များအတွက်ကျယ်ပြန့်ကျော်ကြားတဲ့ဖြစ်ပါသည်. တကယ်တော့, သူတို့ခရီးစဉ်အတွင်းအချို့သောအံ့သြဖွယ်အရသာမြည်းစမ်းဖို့အခွင့်အလမ်းရှိခဲ့ကြောင်းပြောခရီးသွားလာပျော်မွေ့များစွာကို chocoholics. သငျသညျဥရောပနှင့်ကြည်ညိုချောကလက်အားဖြင့်သင်တို့၏သွားရာလမ်းအောင်နေတယ်ဆိုရင်, ကျွန်တော်တို့…
ရထားခရီးသွားခြင်း, ရထားခရီးသွားAustriaစတြီးယား, ရထားခရီးသွားဘယ်လ်ဂျီယံ, ရထားခရီးသွားဒိန်းမတ်, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ရထားခရီးသွားဟန်ဂေရီ, ...
ထိပ်တန်း 10 ဥရောပမှာတော့ပိုက်ဆံအိတ်ချိန်းအချက်များ
စာဖတ်ချိန်:4မိနစ်များ ဥရောပတိုက်တွင်ပိုက်ဆံလဲလှယ်အချက်များရှာဖွေခြင်းတစ်ခရီးသွားဧည့်များအတွက်ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်. ပိုကဘာလဲ, အများဆုံးသောနေရာများအတွက်, သငျသညျငွေကြေးလဲလှယ်မှုနှုန်းအပေါ်ပိုက်ဆံဆုံးရှုံးဖို့မြျှောလငျ့နိုငျ. သငျသညျအထဲကကူညီရန်, ကျွန်တော်တို့ဟာဥရောပအကောင်းဆုံးပိုက်ဆံလဲလှယ်ရမှတ်များစာရင်းကိုရာ၌ခန့်ထားပြီ:…
ရထားခရီးသွားAustriaစတြီးယား, ရထားခရီးသွားဒိန်းမတ်, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ရထား Travel အီတလီ, ရထားခရီးသွားလူဇင်ဘတ်, ခရီးသွားလာရေးသိကောင်းစရာများရထား, ...
စာဖတ်ချိန်:4မိနစ်များ ဒေသခံသကြားလုံးအားလုံးဥရောပကျော်အများအပြားမျိုးပေါင်းအတွက်လာ. နိုင်ငံတိုင်းနှင့်ဒေသသူတို့ကမ်းလှမ်းမှုကိုမှဂုဏ်ယူနေကြသည်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်နည်းနည်းအားရစရာရှိပါတယ်. မွှေးသွားအတူခရီးသွားဧည့်များအတွက်, အသစ်သောအရသာထက်ခရီးသွားလာအကြောင်းပိုမိုသှေးဆောငျရာမရှိ. ဤတွင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထိပ်တန်းရှိပါတယ်5အကောင်းဆုံး…
10 Best Bakeries ခုနှစ်တွင်ဥရောပကြိုးစားပါရန်
စာဖတ်ချိန်:6မိနစ်များ မွှေးသွားအတူခရီးသွားများအတွက်, အာရုံစိုက်! သင်ရုံအချိုပွဲထွက်ကြိုးစားနေ၏မျက်နှာကို ထောက်. ဥရောပမှတဆင့်သွားလာထင်ကြပါပြီမပြုစေခြင်းငှါ, သင်မူကားသင့်ပါတယ်. ဥရောပနီးကပ်လာသငျသညျရှာဖွေစူးစမ်းနေတိုင်းပြည်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုရန်သင့်အားငါသက်ရောက်စေမည်အချို့စိတ်ကူးခဲဘွယ်စားဘွယ်ရှိပါတယ်….
ရထားခရီးသွားAustriaစတြီးယား, ဗြိတိန်နိုင်ငံခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဒိန်းမတ်, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ရထား Travel အီတလီ, ရထားခရီးသွားလာဆွစ်ဇာလန်, ...
စာဖတ်ချိန်:6မိနစ်များ ဥရောပမှာအများစုကအံ့မခန်းတက္ကသိုလ်များရှာဖွေနေ? ထို့နောက်အပေါ်ကိုဖတ်ရှု! ကျနော်တို့တက္ကသိုလ်ရွေးချယ်ရာတွင်အရေးပါသောရွေးချယ်မှုသိ. ဒါပေါ့, တဦးတည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားသို့ရာတစျခုသို့တက်ရောက်ရန်ရွေးချယ်တဲ့အခါတက္ကသိုလ်ကမ်းလှမ်းသောသင်ကြားရေးနှင့်သင်ယူမှုအဆောက်အယူရမယ်. သို့သျောလညျး, sometimes a…
ရထားခရီးသွားဒိန်းမတ်, ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ရထား Travel အီတလီ, ဥရောပခရီးသွား
စာဖတ်ချိန်:5မိနစ်များ အဘယ်အရာကိုမျှအားလပ်ရက်သို့မဟုတ်အားလပ်ရက်ပြောပါတယ်, အတော်လေးရေပန်းခြံနဲ့တူ, သငျသညျမထငျမ? နေရောင်, ရေခဲမုန့်, တချို့အကြီးအကျယ်ရေဆလိုက်ဆင်းလျှောနွေရာသီအားလပ်ရက်များအတွင်းမှာပျော်စရာအဘို့အဆုံးစွန်စာရွက်ဖြစ်ပါသည်! We did the tough job of testing out the Best Water Parks…
ရထားခရီးသွားဒိန်းမတ်, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ရထား Travel အီတလီ, ဥရောပခရီးသွား
စာဖတ်ချိန်:4မိနစ်များ အခါဥရောပအဖြစ်ယဉ်ကျေးမှုမတူညီအဖြစ်တိုက်ကြီးမှကြွလာ, သင် gastronomic အစဉ်အလာပဲအမြိုးမြိုးကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏အလောင်းအစားနိုင်ပါတယ်! သငျသညျစိတ်ဝင်စားဖို့အမျိုးမျိုးတို့ကိုရန်သင့်စွမ်းရည်ကိုနှိမ့်ချစိန်ခေါ်ဖို့ဆန္ဒရှိတယ်ဆိုရင် (ကျနော်တို့ euphemistically ကဒီမှာကြောင်းနာမဝိသေသနအသုံးပြုနေသည်) အခ, ထို့နောက်ကြည့်ပါ…
ရထားခရီးသွားဒိန်းမတ်, ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ရထားခရီးသွားနော်ဝေး, ရထားခရီးသွားဆွီဒင်, ဥရောပခရီးသွား
စာဖတ်ချိန်:4မိနစ်များ လမ်းပေါ်ကအနုပညာကျွန်တော်တို့ရဲ့မြို့ကြီးများပိုပြီးလှပစေသည်အနုပညာထုတ်ဖော်ခေတ်မီပုံစံဖြစ်ပါသည်. A ကောင်းဆုံးလမ်းနံရံကိုလည်းလူမှုရေးအရအရေးကြီးသောဘာသာရပ်စဉ်းစားရန်သင့်အားလာအောင်နှိုးဆွသို့မဟုတ်ဂန္ထဝင်သခင်၏အကျင့်သင်သတိပေးစေခြင်းငှါ,. Cities of Europe are full of…
ရထားခရီးသွားဒိန်းမတ်, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ရထားခရီးသွားအဆိုပါနယ်သာလန်, ရထားခရီးသွားယူကေ, ဥရောပခရီးသွား
အများစုမှာဆိုင်ကယ် Friendly ဥရောပခုနှစ်တွင်မြို့နှင့်မည်သို့ရှိပါ Get ရန်
စာဖတ်ချိန်:4မိနစ်များ သင်သည်တာရှည်ဥရောပရဲ့မဖြစ်မနေ-အလည်အပတ်ခရီးစဉ်အချို့ကိုကြည့်ဖို့လိုလျှင်, အများဆုံးစက်ဘီးဖော်ရွေမြို့ကြီးများ၏အနည်းငယ်ဧကန်အမှန်အသင့်ရဲ့စာရင်းစေမည်. ဤရွေ့ကားမြို့ရွာတို့ဆိုင်ကယ်အားဖြင့်စူးစမ်းဖို့အကြီးအများမှာ, ဘတ်ဂျက်အပေါ်ခရီးသွားလာအဘို့ထိုသူတို့စံပြအောင်. And you can get there by…
ရထားခရီးသွားAustriaစတြီးယား, ရထားခရီးသွားဘယ်လ်ဂျီယံ, ရထားခရီးသွားဒိန်းမတ်, ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ရထားခရီးသွားဟော်လန်, ရထားခရီးသွားလာဆွစ်ဇာလန်, ရထားခရီးသွားအဆိုပါနယ်သာလန်, ...